Tao amin’ny faritra Andamalama, fokontany Antanimasaja izy ireo no sarona mbola teo am-pitetehana ireo sokatra. Ny roa tamin’ireto farany no tsy avotra intsony fa mbola tratra velona kosa ny dimy ambiny ka naverin’ny tompon’andraikitra any anaty rano. Raha ny fantatra hatrany dia toy ny efa mahazatra azy telo mianadahy ireto mihitsy ny fihazana sy ny famonoana voka-dranomasina tahaka izao ary mivarotra izany avy eo. Tafiditra ao anatin’ny biby arovana sady mampiavaka antsika eto Madagasikara anefa izy ireny ka tsy maintsy noraisina ny fepetra. Ireo mpitandro ny filaminana misahana ny fiambenana eo anivon’ny seranan-tsambon’i Mahajanga no nahatratra azy ireo. Raha ny vaovao farany, hiakatra fitsarana tsy ho ela izy ireo, rehefa vita ny fakana am-bavany.